Radio Don Bosco - Hampamoahina azy ny ran’ny mpaminany...
Hampamoahina azy ny ran’ny mpaminany...
Nosoratan'i Ramiandrasoa Jean Emilien Louis Marc
Naseho ny : 15 oktobra 2020
Alakamisy 15 ôktôbra 2020 — Herinandro faha-28 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 11, 47-54 — Ampianaro ahy, ry Tompo ny lalanao, ary tariho ho amin’ny lala-mahitsy aho.
Anisan'ny namonoana ny mpaminany tany amin'ny Testamenta Taloha, eny fa na i Jesoa izay mihoatra ireny mpaminany ireny aza, dia noho izy ireny mitory sy mijoro ary mampianatra ny marina, mitandro ny rariny. Ny antony mantsy dia manelingelina ny Farisianina sy ny mpanora-dalana izany rehetra izany, indrindra eo amin'ny fiainam-bavaka sy ny rafi-piaraha-monina. Satria tokoa i Jesoa no irak'Andriamanitra mivantana sy mpitondra ny hafany tety an-tany, ka tsy eken'ny sain'izy ireo velively izany.Tsy mataho-maso mena anefa i Jesoa fa vonona ary sahy mijoro milaza ny marina araka an'Andriamanitra. Tsy natahotra vavan'olona i Jesoa, na dia efa fantany àry hoe hiafara amin'ny fanenjehana azy sy ny fifofoana ny ainy. Izay tokoa ilay hoe, izay sahy maty no mifono lambamena.
Ankehitriny dia mbola hita sy tsikaritra ny toe-tsaina farisianina amin'ny toerana rehetra, izany dia miseho amin'ny tsy famelana ny kristianina haneho ny finoany, amin'ny fanaratsiana ny Fiangonana, amin'ny fanenjehana ny mpitondra ao amin'ny Fiangonana. Koa alao hery àry, ho an'izay voakasik'izany, fa raha tsy miaraka amin'Andriamanitra angaha moa misy mpanenjika izany, fa ny hazo avo hono halan-drivotra, ary ny fotsifotsy halan-doto, ka loza ho ahy raha tsy mitory ny Vaovao Mahafaly aho, hoy i Masindahy Paoly. Rasiko ny anjara manandrify ny fiantsoanao ahy, vonona aho ho tia hatramin'ny fara fofon'aiko. Fa izany no voadiko masina, ry Andriamanitra Ray ô ! Amen.